संघीयता भनेको बटम अप एप्रोच हो - Karobar National Economic Daily
संघीयता भनेको बटम अप एप्रोच हो
query_builderFebruary 10, 2017 10:41 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1052
तस्विर :सुनिल प्रधान
संघीय शासन विज्ञ
संघीयता कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको पनि एक महिना भइसक्यो ।
तर, सरकारले प्रतिवेदन लागू गर्नुको ठाउँमा उल्टै अध्ययन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे संयोजक रहेको एक कार्यदल बनाएको छ । एकातिर प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन भने अर्कातिर निर्वाचनको हल्ला पिटाए पनि सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्न सकिरहेको छैन ।
यसका अतिरिक्त बरु नेपथ्यमा चुनाव गराउन अक्षम देखिँदै आएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको चर्चा सुरु भएको छ । यही मेसोमा संघीय शासनका विज्ञ तथा पूर्वसभासद् कृष्णप्रसाद सापकोटासँग कारोबारका लागि भगवान खनालले गरेको कुराकानी :
राज्य पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय भइसकेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
प्रतिवेदन देख्दा त सरकारमै गएको छ । आयोगले सरकारलाई बुझाएको देखे–सुनेको हो । प्रधानमन्त्रीकै रोहवरमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्नुभएको हो । उहाँहरूले पनि अस्वीकार गर्नुभएको छैन ।
यो मैले मात्र होइन, आमजनताले बुझेको कुरा हो । प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न कार्यदल पनि बनाएको भन्ने सुनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले केही वकिल बोलाएर आयोगको प्रतिवेदनका बारेमा राय–सल्लाह लिनुभएको कुरा पनि बाहिर आयो ।
वकिलहरूले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरे पनि हुन्छ भन्ने राय दिनुभयो भन्ने सुनियो । एउटा संवैधानिक आयोगले जे म्यान्डेट पाएको हो त्यो काम गरेपछि लागू हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था किन पालना गरिएन ? तीन जना मन्त्री सम्मिलित कार्यदलको आशय के हो ? यो कार्यदलले के हेर्ने हो ? कसरी हेरिरहेको छ भन्ने नै थाहा भएन ?
सरकारको अनिच्छाका कारण प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको हो ।
सरकारमा रहेका राजनीतिक दल र मुख्य दल नेपाली कांग्रेसकै सबैभन्दा ठूलो अनिच्छा भएको बुझिन्छ । उसले यो कुन दलको बढी प्रभावमा आएको भनेर शंका गरेको छ । दलहरू कहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भन्छन्, कहिले स्थानीय निकायको भनिरहेका छन् । यो के हो बुझ्न सकिएको छैन ।
सरकार संवैधानिक आयोगलाई खलबलाउने दाउपेचमा छ । आयोगको मूल्य–मान्यता समाप्त पार्न खोजिरहेको छ । यसले सरकार, पार्टी कसैलाई फाइदा हुँदैन । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रलाई फाइदा गर्दैन ।
कहिले कार्यान्वयनमा आउने छाँटकाँट देख्नुभएको छ त ?
मेरो विचारमा त सरकार पछाडि हटेको छ । संविधानतः बुझाएकै भोलिपल्ट लागू हुनुपर्नेमा त्यसो भएन । यो प्रतिवेदनमा खासगरी नेपाली कांग्रेसले बढी विरोध गरेजस्तो छ । नेपाली कांग्रेसको टेकोमा बनेको यो सरकारले यही कारणले लागू गरेन ।
सरकारले चुनाव गर्न चाहेकै छैन । सरकार पछाडि हटेको छ । प्रतिवेदन नदिउन्जेल छिटो बुझाऊ भनियो, तर बुझाएपछि लागू गर्नबाट पछाडि हट्यो । यसको किन विरोध भइरहेको छ, मैले राम्रोसँग बुझ्न सकेको छैन ।
काम भर्खर थाल्दा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने नेपाली कांग्रेसलगायतका दल अहिले प्रतिवेदन बुझाएपछि चुनाव गर्न नचाहने वा स्थानीय निकायको गर्ने भन्ने भन्दै छन् । यसले सन्देश राम्रो गएको छैन । निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो ।
प्रतिवेदनमा एमाले हाबी भएको भन्ने छ नि ?
यो गलत विश्लेषण हो । आयोगका तीन जना सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छ । आयोग सदस्यहरू सुनिलरञ्जन सिंह, डोरमणि पौडेल र लक्ष्मी चौधरीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छ ।
एमाले समर्थित भनिएका आयोगका सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छ, कसरी अब एमालेलाई कसरी यो आरोप लागेको हो ? यति पनि कुरा नबुझी सतही रूपमा यसो भनिएको होला ।
संविधान कार्यान्वयनको पाटो पेचिलो बन्दै गएको हो ?
सरकारले नै संविधान कार्यान्वयन गर्न नचाहेजस्तो देखिन्छ । मुलुकमा चाहे संघीय होस् वा एकात्मक, जुन शासन प्रणाली भए पनि स्थानीय सरकार त छ नि । ९० प्रतिशत जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको स्वामित्व कसैले नलिने भनेको त विचित्रको कुरा हो ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सबैभन्दा पहिला हुनुपर्छ । तर, सत्तामा रहेका दलले चुनाव गर्नुपर्छ भनेको सुनिँदैन । संघीयताका पक्षधर भनिएका तराई मधेस केन्द्रित दलले पनि चुनावको कुरा गर्दैनन् । अहिले कता–कता प्रदेशको चुनाव गर्ने रे, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने अफवाह फैलाइएको छ । यो उल्टो कुरा हो ।
संघीयता भनेको बटम अप एप्रोच हो, जुन तहको निर्वाचन गर्दा जनता बलिया हुन्छन्, त्यसको चुनाव पहिले हुनुपर्छ । जनताले एक दिन पनि उनीहरूका प्रतिनिधिबिना बिताउनु हुँदैन । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ । संघीयता भनेको प्रदेश हो, प्रदेश भनेको संघीयता भन्ने बुझाइ भयो ।
यो अलमलता हो । अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता छ । लोकतन्त्र गणतन्त्र जे भने पनि मानसिकता केन्द्रीकृत छ । लोकतन्त्र भनेको भनिने मात्रै त होइन नि भन्ने जस्तो भएको छ । लोकतन्त्रको मानक भनेको सिंहदरबार र यसवरपरको शासन मात्रै होइन ।
लोकतन्त्र भनेको जनताको सहभागिताको शासन हो । उनीहरूले आफ्ना आवश्यकता आफैं पहिचान गर्ने, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहभागिता जनाउन पाउनुपर्छ । उनीहरू आफ्ना प्रतिनिधिबिना एक मिनेट पनि बस्न नहुने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर दुर्भाग्य हामीमा यही हुन सकेको छैन । सबैको प्रतिनिधित्व सम्भव हुने स्थानीय सरकारमा हुन्छ । संघ र प्रदेशमा यस्तो सहभागिता हुन सक्दैन ।
निर्वाचनका लागि नागरिक समाजले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ ?
जतिजति बेला राष्ट्रमा संकट आउँछ, त्यति बेला नागरिक समाजको भूमिका हुनुपर्ने हो । जनतालाई बलियो बनाउन नागरिक समाजले भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, यतिबेला खासगरी स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा नागरिक समाजमा मौनता देखिन्छ ।
मिडियाले अझै बढी भूमिका खेल्नुपर्ने हो । निर्वाचन गर्न नचाहने तŒवका विरुद्धमा विश्लेषणात्मक ढंगले नै प्रहार गर्नुपर्ने हो । मिडियाले सम्पादकीयसम्म लेखेर निर्वाचनको माग गरिरहेका छन् । दैनिक समाचारमा निर्वाचनका सन्दर्भमा सामग्रीहरू आइरहे पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अझै बढी आवाज मुखरित हुनुपर्ने हो ।
जनताले किन निर्वाचन चाहियो भन्न सक्दैनन् ? निर्वाचन जनआन्दोलनकै एजेन्डा हुनुपर्छ भन्न पनि थालिसकिएको छ । यो साझा एजेन्डा किन बन्न सकेको छैन ?
यो कमी भएको छ । यी कुरा एउटा त आमजनताले बुझेका छैनन् । संविधान बन्दा पनि जनतालाई उनीहरूका हक–अधिकारबारे बुझ्ने मौका दिइएन, उनीहरूलाई सहभागी गराइएन । अर्को कुरा, संविधान बनाउनेले नै संविधानमा भएका हक, अधिकार र व्यवस्थाका बारे बुझेका छैनन् ।
माननीयहरूका अभिव्यक्तिहरू यस्तै देखिन्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेता जसले संविधानको स्वामित्व लिनुपर्ने हो उहाँहरूले पनि लिन चाहेको देखिँदैन । संविधान बनेपछि पनि जनतालाई संविधानमा भएका व्यवस्थाका बारे बुझाउने प्रयास गरिएन ।
केही जिल्ला भ्रमण गरी सबै राजनीतिक पाटीका स्थानीय नेता, कार्यकर्तासँग छलफल गर्दा उनीहरू बुझ्न चाहन्छन् । जान्न चाहिरहेका छन् र यो कुरा आज होइन, हिजै बुझ्नुपथ्र्यो भन्छन् । उनीहरूलाई प्रदेश र साँध–सिमानाका एकोहोरो रटान दिइएको छ, तर संविधानमा व्यवस्था भएका हक–अधिकारका बारेमा केही बुझाइएको छैन । यस्तो एकोहोरो रटानले उनीहरू दिक्क छन् ।
उनीहरूलाई कुन–कुन सरकारमा के अधिकार दिइएको छ ? कुन चुनाव हुँदा उनीहरूले फाइदा पाउँछन् भन्नेमा थाहा दिएमा उनीहरू निर्वाचनको माग गर्दै तात्तिन्छन् नि । महिलालाई के फाइदा हुन्छ ?
आदिवासी जनजातिलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी दिएमा उनीहरू पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जुर्मराउँछन् । यसैले अहिले आँधी आउनुभन्दा अघिको सन्नाटा छाएजस्तो अवस्था देखिएको छ । अहिले हल्ला चलेजस्तो स्थानीय तहको निर्वाचन हुने नहुने भन्ने कुरा दुई हप्तामा सबै निर्धारण हुन्छ ।
यो बुझेपछि मानिस जाग्छन् । अहिले जसले निर्वाचनको वातावरण बिथोलिरहेको छ वा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेको छ, यसका विरुद्ध जनता जुमुराउँछन् ।
संघीयताका चुनौती के देख्नुभएको छ ?
संघीय प्रणाली भनेको स्वशासन र साझा शासनको मिश्रित रूप हो । स्वशासन त संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम तततत् तहले कार्यान्वयन गरेमा राम्रै होला । तर, साझा शासनमा केही समस्या आउन सक्छन् । जस्तो, साझा शासनको अभ्यास कसरी गर्ने ?
भारतको जस्तो गर्ने कि युरोपको जस्तो गर्ने ? भारतले लाइनिन एजेन्सी तलसम्म खडा गर्छ । तर, जर्मनीले लाइन एजेन्सी तल खडा नगरी स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्छ । आवश्यक शक्ति, जनशक्ति, बजेट दिन्छ । यसले राज्यको तह बलियो हुन्छ ।
त्यसो नगर्दा कहिलेकाहीँ अधिकारको हस्तक्षेपको कुरा आउन सक्छ । एउटा तहको अधिकार अर्को तहले हस्तक्षेप गर्दा मुद्दा मामिला बढ्छ । हाम्रो वास्तवमा संयन्त्र गतिलो बनाएको छैन ।
यदि स्थानीय तह र स्थानीय प्रदेशबीच विवाद हुँदा प्रदेशको सभाले छिनोफानो गर्ने भनिएको छ । यो चित्त नबुझे संवैधानिक बेन्चमा जाने भनिएको छ । यो मात्र होइन, अन्तरसरकार परिषद् राखिनुपथ्र्यो । तीनवटै सरकारका प्रनितिधि राखेर अन्तरसरकार परिषद्को व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । तीनवटै तहले कानुन बनाउँदा एकले अर्कोसँग समन्वय नभएमा द्वन्द्व बढ्छ । जस्तो, दक्षिण अफ्रिकामा समन्वय गर्ने गरी कानुन बनाइन्छ ।
त्यहाँ प्रदेशले बनाउने कानुन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरिन्छ । हामीले संविधानमा प्रत्येक तहले कानुन मात्रै बनाउने भनिएको छ । संविधानमा व्यवस्था नभए पनि अब आउने संघीय कानुनले अन्तरसम्बन्ध नखलबलिने गरी कानुन बनाइनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था नगरे पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संघ–महासंघका प्रतिनिधि राखेर परिषद् बनाइनुपथ्र्यो ।
आर्थिक रूपमा पनि विवाद आउन सक्छ । धेरै अधिकार बजेटका लागि संघमै छ । विज्ञ पनि स्थानीय तह स्रोत नभएकाले चल्दैनन् भनिरहेका छन् । तर, मेरो अध्ययनमा संसारका कुनै पनि मुलुकका स्थानीय सरकार आफ्नै स्रोतले कहीँ पनि चलेका छैनन् ।
के मानिन्छ भने देशभित्रको स्रोत साझा हो । जुन तहले उठाउँदा बढी उठ्छ उसैले उठाउने, जसले खर्च गर्दा गदी बढी प्रभावकारी हुन्छ त्यही गर्ने हो । स्रोत त्यही बाँडफाँड गर्ने हो, यो नै वित्तीय संघीयता हो । यसले चारवटा कुरा भन्छ, राजस्व संकलन, दर तोक्ने, क्षेत्र र राजस्व खर्च । अर्को अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ ।
यसमा प्रत्येक तहलाई जति अधिकार दिएको छ त्यसलाई चलाउन खर्च दिनुपर्छ । जस्तै शिक्षा मन्त्रालयले चलाउने माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । अहिले केन्द्रबाट दिइएको बजेट भोलि स्थानीय तहलाई यो अधिकार पाएपछि बजेट पनि दिनुप-यो । यस्तै स्वास्थ्य, सिँचाइ, कृषिमा पनि अधिकार दिइएको छ । यसैले बजेट पनि दिनुपर्छ ।
अर्को सबै स्थानीय सरकार एउटै स्तरका हुँदैनन् । कोही सम्पन्न हुन्छन्, कोही विपन्न हुन्छन् । विपन्नलाई राज्यले समानीकरण अनुदानको संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यसैले बजेट दिइनुपर्छ ।
संविधानले प्रदेश र स्थानीय सरकारको तुलनामा संघमा संवैधानिक र आर्र्थिक अधिकार बढी दिएको छ । यसले कतै संघ बढ्ता हाबी हुन्छ कि भन्ने देखिँदैन ?
संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ । यसले विभिन्न सिद्धान्तअनुसार राजस्व बाँडफाँड गर्ने भनिएको छ । यस्तै अभ्यास दक्षिण अफ्रिकामा पनि छ । तर, हाम्रोमा बन्ने वित्त आयोगमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छैन ।
यसैले संघ हाबी हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई चाहिने जति बजेट दिँदैन कि भन्ने देखिए पनि वास्तवमा संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्छ । संविधानले यस आयोगमा संघले नै प्रतिनिधि ढ्याक्कै राख्ने भन्ने लेखिएको छैन । संघीय कानुन बन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारका संघ, महासंघको सिफारिसमा सदस्य राख्ने व्यवस्था भएमा यसले जवाफदेयिता बढाउँछ ।
अर्को कुरा, वित्तीय संघीयता भनेको कामलाई स्रोतले पछ्याउनु हो । त्यस कारणले कामको भार कुन–कुन क्षेत्रमा कति छ, यसको मापन गरी सूचक बनाउने काम वित्त आयोगको हो । यसो भएमा कुन सरकारलाई कति बजेट चाहिन्छ थाहा हुन्छ ।
यही आधारमा ती सरकारले खर्च पाउँछन् । विद्यमान स्थानीय निकायलाई पनि एउटा सिद्धान्त बनाएर केन्द्रबाट बजेट पाइरहेका छन् । जस्तै मानव विकास सूचकांक, जनसंख्या, भूगोल, दुर्गमता आदि मानकका आधारमा ती निकायमा बजेट प्रवाह गरिन्छ । तर, यी सूचक केन्द्रको हकमा लागू छैन ।
यसैले भोलि बन्ने संघलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई लाग्ने सूचक नलाग्ने भन्ने हुनु हुँदैन । संघीयतामा केन्द्र सरकारलाई सूचक नलाग्ने भयो भने त्यो असाध्यै अव्यावहारिक हुन्छ र यसले समस्या निम्त्याउँछ । यो कठिन र चुनौतिपूर्ण छ । काम नगर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । मान्छेलाई हातखुटा बाँधेर पौडी खेल्न जान भन्न सकिन्न । खुला ढंगले खेल्न सिकाएर पौडन दिनुपर्छ ।
यस्तै सब्सिडियारिटीको सिद्धान्तअनुसार जति अधिकार तल दियो उति राम्रो हुुन्छ । यस सिद्धान्तले हरेक नागरिकलाई सार्वभौम एकाइ मान्छ । नागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने जति अधिकार उसले गर्छ र नसक्ने चाहिँ उसको नजिकको सरकारले प्रयोग गर्छ । यसैले जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारले प्रयोग गर्दा उनीहरूको स्वामित्व हुन्छ भन्ने हो ।
यहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको प्रारम्भिक खर्च व्यवस्थापनको बारेमा केही अध्ययन वा अनुमान गर्नुभएको छ ?
म त्योसम्बन्धी विज्ञ होइन र त्यस्तो अध्ययन पनि गरेको छैन । संविधानअनुसार कामको भार हेरेर अहिलेको राजस्व आर्जनको ५० प्रतिशत बजेट प्रवाह गरिनुपर्छ जस्तो अनुमान गरेको छु । संघीयता कार्यान्वयनको खर्चको अध्ययन गरिनुपथ्र्यो, तर आजसम्म भएको छैन ।
तीनवटै तहमा कर्मचारी कति चाहिन्छन्, कति तलब–भत्ता चाहिन्छ भन्ने अध्ययन गरिनुपथ्र्यो । एक जना कर्मचारीले कति जनसंख्यालाई सेवा दिन सक्छ ? यसको विश्लेषण गरिनुपर्छ । एक जनाले २ हजार जनसंख्यालाई सेवा दिन सक्छ भने ५ सयलाई सेवा दिने गरी किन बनाउने ?
हामीले कर तिरेको पैसा अधिकतम सदुपयोग हुने गरी थोरै कर्मचारी राखी धेरै सेवा दिने र विकासमा धेरै पैसा खर्च गरिनुपर्छ । तर, हामी जे कुरामा पनि दोहोरो मापदण्ड अपनाउँछौं । हामीमा भएको द्वैध मनस्थितिले समस्या ल्याउँछ ।
कतिपय संघीय मुलुक असफल पनि छन् । नेपाल त झन् नवोदित मुलुक हो । यसले कसरी संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्छ ?
संघीयता आफैंमा असल वा खराब भन्ने हुँदैन । संघीयतामा अर्काको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्न हुन्न भन्ने कुरा बढी बुझ्नुपर्छ । संघीयतामा बन्ने सरकारले मेरा निम्ति भन्दा देश र जनताका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ ।
आफू शक्तिशालीभन्दा पनि जनता शक्तिशाली हुने गरी काम गर्नुपर्छ । अधिकार आफैंमा मात्रै लिने काम भएमा सफल हुन्न । संविधान आएको यो बीचको तरिका हेर्दा अगाडि बढाउन तयार छौं जस्तो लाग्दैन ।
यो रामवाण पनि होइन । संसारमा एकात्मक व्यवस्था भएका मुलुकले पनि धेरै राम्रो गरेका छन् । स्क्यान्डेभियन मुलुक सबैमा एकात्मक शासन व्यवस्था छ । ती सबैले राम्रो गरेका छन् । उता भारत, जर्मनी, मलेसियाले संघीय व्यवस्थामा राम्रो गरेका छन् ।
नाइजेरियालगायतमा संघीयताले राम्रो गरेको पाइँदैन । जति–जति जातीयकरण भएको छ, त्यहाँ संघीयताले राम्रो गरेको पाइँदैन । जति लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अंगीकार भएको छ, प्रयोग, अभ्यास र सन्तुलनले कुनै पनि व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने हुन्छ । आफैंमा संघात्मक वा एकात्मक व्यवस्था असल र खराब हुँदैन भन्ने लाग्छ ।
संघात्मक र एकात्मक मुलुकको तहगत खर्च–आम्दानी
विश्वका २८ वटा देशले संघात्मक व्यवस्था अपनाइएका छन् भने नेपालले अवलम्बन गरिसकेपछि यो संख्या २९ पुग्नेछ । कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा असल वा खराब हुँदैन । व्यवस्था नै त्यो मुलुकको प्रगतिको द्योतक हुने पनि होइन ।
व्यवस्था सञ्चालनको अभ्यास, अवलम्बन गरिने नीति–नियम, राजनीतिक आचरण र संस्कारमा निर्भर रहन्छ । संविधानअनुसार नेपाल पनि संघात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरिसके पनि यसका अवयवहरू बन्ने बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ ।
तालिकामा संघात्मक र एकात्मक व्यवस्था अपनाएका मुलुकले कुल सरकारी खर्चमा तहगत सरकारको खर्च र आम्दानी प्रतिशतलाई देखाइएको छ, जसमा संघीय देशको खर्चमा संघको सबैभन्दा धेरै खर्च देखिन्छ भने कममा स्थानीय सरकारले खर्च गरेको देखिन्छ ।
यस्तै कुल सरकारी आयमा पनि संघको सबैभन्दा बढी र स्थानीय सरकारको कम देखिन्छ । उता एकात्मक शासन प्रणाली अपनाएको नेपालले खर्च र आय दुवैमा केन्द्र सरकारको हिस्सा निकै धेरै देखिन्छ । तर, डेनमार्कमा केन्द्र सरकारको भन्दा स्थानीय सरकारको खर्च बढी छ ।
कुल सरकारी खर्चमा तहगत सरकारको खर्च प्रतिशत कुल सरकारी आयमा तहगत सरकारको आय प्रतिशत
संघ प्रदेश स्थानीय संघ प्रदेश स्थानीय
अस्ट्रिया ६९.५० १६.८० १३.७० ७५.२३ ११.२८ १३.४९
बेल्जियम ६३.६१ २३.२० १३.१८ ८३.६९ ९.५० ६.१
जर्मनी ६१.२८ २२.४७ १६.२४ ६५.०८ २३.५९ ११.३३
स्पेन ५९.५१ ३०.०७ १०.४२ ५७.४० ३१.४१ ११.१९
एकात्मक देश केन्द्र स्थानीय केन्द्र स्थानीय
नेपाल ९२.५८ ७.४२ ९७.९० २.१०
डेनमार्क ३८.३७ ६१.६३ ७०.८६ २९.१४
स्लोभाकिया ८०.१४ १९.८६ ८६.२९ १३.७१
पोल्यान्ड ६९.०२ ३०.९८ ८२.३३ १७.६७
स्रोत : संघीयता र स्थानीय स्वायत्त शासन, २०७१ (पृष्ठ १५ र १६)
राज्य पुनर्संरचना : के काम सकियो ? के बाँकी छ ?
सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म लागू नगरे पनि प्रतिवेदन संघीयता कार्यान्वयनको कोसेढुंगा भने हो ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिको संख्या र सिमाना निर्धारण, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम, केन्द्र र वडा विभाजनको सिफारिश र संख्या, सिमाना निर्धारण तथा नाम, केन्द्र र वडा विभाजनसहितको प्रतिवेदन आयोगले पेस गरेको छ ।
यस्तै, विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या वा सिमाना निर्धारणको काम आयोगले गरिरहेको छ । यसैगरी सरकारले स्थानीय तहमा आवश्यक प्रशासनिक संरचना र जनशक्ति र स्थानीय सेवाको उपयुक्त ढाँचाको प्रस्ताव गर्दै छ ।
यस्तै केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तथा गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला सभाबीच काम, अधिकार, स्रोतको बाँडफाँडका काम भइरहेको छ । काठमाडौं राजधानी र उपत्यकाको एकीकृत र समन्वात्मक विकासका पनि काम भइरहेको छ ।